Tripgbọ njem n'ụgbọ mmiri nke Birmingham | Akụkọ Njem
Otu n'ime ụzọ kachasị mma iji chọpụta Birmingham ọ dị na ụgbọ mmiri na-agba site na mmiri ochie ya. Ma ọ bụ na etiti akụkọ ihe mere eme nke obodo Bekee a gafere ọtụtụ narị ụzọ mmiri ndị a n'oge ndị ọzọ a ọrụ dị mkpa dị ka ụzọ ụgbọ njem maka ihe dị arọ n'oge Mgbanwe Mmegharị, mgbe ha na mpaghara ndị ọzọ nke West Midlands na-agwa obodo ahụ.
Ebe ọdịda anyanwụ adịghị ka nke Venice, mana ọ na-atọ ụtọ nke ukwuu. The ije bụkwa a nnọọ obi ụtọ na yi ọrụ nnọọ mara mma maka ndị njem nleta, na ezigbo ihe ịtụnanya, ka ha na-abịa n'ọtụtụ usoro nke nnukwu ụlọ. Ọ bụghị n'efu na oge Victorian nke a bụ obodo ukwu nke abụọ na mba ahụ.
Zọ gasị amalite na Ogige Gas Street, mmalite nke njem site na ntanetị nke ọwa dị ọtụtụ karịa nke Venice n'onwe ya. Ihe oyiyi nke ọwa mmiri Birmingham, nke ruru unyi ma na-esi ísì ụtọ, ahapụwo. Taa, anyị na-ahụ ntanetị nke ọwa arụzigharị kpamkpam, echekwara nke ọma ma gbanwee maka ọrụ ọhụrụ ha: ha anaghịzi ebufe ngwa ọrụ ụlọ ọrụ, mana ndị njem nleta.
Ọwa ndị a na-etolite otu n’ime ebe ntụrụndụ kacha mkpa n’obodo ahụ, ọkachasị n’oge ọnwa ọkọchị, mgbe ụlọ oriri na ọ restaurantụ restaurantụ dị n’akụkụ ya, yana egwu sitere na ụlọ mmanya, ebe a na-a cockụ mmanya na ebe a na-akụ egwu. A obi ụtọ na njem gị na Birmingham.
Ozi ndị ọzọ - Tolkien na Tower nke Sauron na Birmingham
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Getaways Europe » England » Gbọ njem na ọwa mmiri nke Birmingham